Monday June 11, 2012 - 23:00:41 in Warar Af-Soomaali ah by Super Admin
ASOJ.ORG - Baaris ay sameeysay Associated Somali Journalists ASOJ ayaa lagu xaqiijiyay in Saxaafiyadda Metra Abdi Omar Indhacase u dhimatay sun la siiyay.
Dhaqtarka Metra Abdi Omar ayaa ASOJ u xaqiijiyay in la sumeeyay Saxaafiyada dhimatay ,sida uu ku ogaaday baaristiisa,
Hooyada dhashay Metra Abdi oo Wariyeyaal ka tirsan ASOJ ku booqdeen gurigeeda waxay tiri “ Gabadheeyda markii uu dhaqtarka xaqiijiyay in la sumeeyay ,waxay igu tiri hooyo waxaa I sumeeyay hebel,waan aqaanaa laakiin hadaan dhinto yaan waxba lagu sameeyn”
Baaris ay sameeyeen Wariyeyaasha ASOJ waxay ku ogaadeen inuu khilaaf mudo dheer socday ka dhaxeeyay Agaasimaha Telefishinka Universal Muqdisho Ibrahim Jeekey iyo Saxaafiyada dhimatay ee Metra Omar.
Metra allaha u naxariistee ,inta ay dhiman ka hor waxay Wariyeyaashii booqday ku tiri “ Ibrahim Jeekey ayaa ka shaqeeyay sunta aan cabay,waxaana I siiyay nin lagu magacaabo Macalin Taatiko oo qeybta Turjubaanka UNIVERSAL TV joogo”
Allaha u naxariisto Metra waxay suntan la siiyay la xanuunsaneed todobaad ,kadibna waa u dhimatay suntan.
Associated Somali Journalists ASOJ waxay Dowladda KMG iyo Maamulka Universal Tv ugu baaqeeysaa inay baaris ku sameeyaan habkii loo sumeeyay Metra Abdi Omar.
ASOJ oo aad uga xun falka lagu sumeeyay Metra waxay ku baaqeeysaa in Maxkamad la horgeeyo shaqsiyaadka suntan siiyay gabadha geeriyootay,iyadoo la hayo cadeeymo ka marqaati kacaya habkii loo sumeeyay Gabadha iyo dhaqtarkii baarista ku sameeyay jirkeeda.
Waa arrin aad looga xumaado In qof ka tirsan bahda Saxaafadda dilo ama sumeeyo qof la xirfada ,waxaana muhiima in falka nuucaana laga hortagaa